नेपालमा अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक, कहाँबाट कति आए ? हेर्नुस् इन्फोग्राफिक्स | NiD - News
नेपालमा अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक, कहाँबाट कति आए ? हेर्नुस् इन्फोग्राफिक्स
पुष्पराज आचार्य, अन्नपुर्ण पोस्ट, ०६ मङि्सर २०७५
काठमाडौं : यस वर्ष अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक भित्रिएका छन्। सन् २०१८ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म आठ लाख ८२ हजार पाँच सय ३१ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा सात लाख ५७ हजार चार सय ४८ पर्यटक आएका थिए। यो संख्या गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १६ दशमलव ५ प्रतिशत बढी हो। अध्यागमन विभागका अनुसार, अक्टोबरमा यस वर्षकै धेरै एक लाख नौ हजार सात सय ३३ पर्यटक आएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले सन् २०१७ मा पर्यटक आगमन १० लाख पुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, नौ लाख ४० हजार दुई सय १८ मात्र आएका थिए। सबैभन्दा बढी भारत र त्यसपछि चीनबाट पर्यटक आएका छन्।
सन् २०१८ को १० महिनामा भारतबाट एक लाख ६१ हजार नौ सय ६३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कैलाश मानसरोबर तीर्थाटन गर्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्या उच्च छ। यस्तै भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत होटललाई विलासी सुविधाका रूपमा कर लगाएका कारण त्यहाँका होटलको सेवा महँगो भएपछि सभा, सेमिनार, इन्सेन्टिभ टुर तथा विवाह जस्ता सामाजिक कार्यका लागि मध्यमवर्गीय भारतीयको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको छ।
१० महिनाको अवधिमा चीनबाट एक लाख २१ हजार चार सय १८ पर्यटक भित्रिएका छन्। पछिल्लो समय चिनियाँ पर्यटकको संख्या विश्वभर बढिरहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालले अझै धेरै चिनियाँ पर्यटक भिœयाउन पहल गरिरहेको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी बताउँछन्।
यस्तै सन् २०१८ को अक्टोबरसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ७३ हजार ६ सय ७७ र बेलायतबाट ५० हजार एक सय ६१ पर्यटक नेपाल भ्रमण गरेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका र बंगलादेशबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। यो अवधिमा ४६ हजार २८० श्रीलंकाली र २१ हजार एक सय १० बंगाली नागरिकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। युरोपेली देश जर्मनीबाट ३० हजार ८६ र फ्रान्सबाट २५ हजार पाँच सय १८ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्।
दक्षिण कोरिया र जापानबाट क्रमशः २७ हजार ६ सय ९० र १२ हजार एक सय १० पर्यटक भित्रिएका छन्। थाइल्यान्डबाट २७ हजार चार सय ५९ पर्यटक आएका छन्। यस्तै, मलेसिया, स्पेन, इटली, क्यानडा र नेदरल्यान्ड्सबाट १० हजारभन्दा बढी पर्यटक आएका छन्।